सीता भण्डारी मृत्यु प्रकरण : सिसीटिभी फुटेजमा जे देखियो… « News24 : Premium News Channel
बुटवल । भदौ २० गते रुपन्देहीको तिलोत्तमा नगरपालिका वडा नम्वर ५ मा भएको सीता भण्डारी पौड्याल मृत्यु प्रकरणबारे सिसीटिभि फुटेज बाहिरिएसँगै थप नयाँ रहस्य खुलेको छ ।
भदौ २० गते घरमा ४३ बर्षीय श्रीमान टिका पौड्यालकी २७ बर्षीया श्रीमती सीता बिहान करिव ५ बजे मृत अवस्थामा फेला परेकी थिइन् । सीताको मृत्यु नभई हत्या भएको भन्दै माइतीजनले भने पनि पोष्टमार्टम रिपोर्टमा झुण्डिएर मृत्यु भएको भनिएको छ ।
त्यसपछि मृतक सीताका माइतीजन र आफन्तजनले घटना लुकाउन पोष्टमार्टम रिपोर्ट गलत ल्याइएको भन्दै विरोध प्रदर्शन र सीताको मृत्युबारे सत्य छानविन गर्न माग गरिरहेका छन् । श्रीमान टिकाको कनेक्सन माथिल्लो तहसम्म भएकाले हत्यालाई आत्महत्यामा रुपान्तरण गरिएको माइतीजनको भनाइ छ ।
भदौ ५ गते घरमा आफ्नो जन्म दिन मनाएर सीता भदौ ६ गते जनैपुर्णीमाको दिन श्रीमान् टिकासँगै माईती घर गएकी थिइन् । ससुराली गएपछि टीका फर्किए तर, सीता भने तीज माईतीमै मानेर फर्किने गरि बसेकी थिइन् ।
तर, भदौ १९ गते सीतालाई श्रीमानले दिउँसो फोन गरेर घर आउन भने । टीकाले २० गते दाईकी छोरी भतिजीको जन्म दिन मनाउनु पर्ने भएकोले घर जान भनेका थिए । त्यसपछि श्रीमानको बचन हार्न नसकेर भदौ १९ गते दिउँसो नै घर गएकी थिइन् सिता ।
मृतक सीताकी श्रीमान् पाल्पाको तानसेनस्थित दि दरवार कटेज एण्ड रिर्सोट सञ्चालन गगरेर बसेका छन् । त्यसदिन टिकाले तानसेनबाटै फोन गरेर सीतालाई ‘तिमी घर जाउ म साँझ आउँछु’ भनेका थिए ।
माइतीजनका अनुसार बेलुकी टिका तानसेनबाट मदिराले लठ्ठ भएर ससुराली आएका थिए । ससुराली पुगेर सासु ससुराको नमस्कार पनि नफर्काई बाहिरिएका थिए । बाहिरिनुअघि ‘अब म रिल्याक्सको जिन्दगी जिउँछु, अब तपाईकी छोरी बितरा पर्ने भई’ भनेर जोडले गाडीको ढोका लगाएर हिँडेका थिए ।
मामा ससुरा आकाश पोखरेलले टिकाको अवस्था त्यस्तो देखेपछि साँझ ६ बजेदेखि ९ बजेसम्म उनलाई फोन गरेका थिए । तर उनको फोन उठेन । भोलिपल्ट बिहान मामा आकाशलाई करिव ५ बजेको समयमा टिकाले ८ सेकेन्ड मात्र मिसकल गरेको मामा आकाशको भनाइ छ ।
सिसीटिभी फुटेजमा जे देखियो
उनले आफ्नो सिसीटिभी सार्वजनिक गर्दै भनेका छन्–‘ घरमा श्रीमाती त्यस्तो अवस्थामा थिइन् भने कुनै श्रीमान त्यसरी निर्धक्कसँग बाहिर जान सक्छ ? एउटी महिला बसेको कोठा त्यसरी भताभुङ्ग भएको छ, सिताको आँखामा निला डाम छ, शरीरमा पनि दागहरु छन् ।’
घटना हेर्दा सीतामाथि हातपात भएपछि मृत्यु भएको हुन सक्ने न्यौपानेको भनाइ छ । न्यौपानेको सिसीटिभि फुटेजमा भदौ १९ गते दिउँसो माइतीबाट घर आएकी सीताले गल्लीमा रहेको स्कुटी साँझ साढे ७ बजेको समयमा भित्र पार्किङ गरेको देख्न सकिन्छ । र, साढे ७ बजेकै आसपासमा श्रीमान् टिका दाजुकी छोरीलाई गाडीमा ल्याएर घर आएको सिसीटिभीमा देख्न सकिन्छ ।
८ बजेर ४० देखि ४७ मिनेटको समयमा नचिनेको एक जना मानिस टिकाको घरभित्र आएको तर, त्यसपछि ती व्यक्ति त्यही बसेको वा फर्केको देख्न नसकेको न्यौपाने बताउँछन् ।
सोही दिन राति करिव साढे ११ बजेको समयमा टिकाका दाजु हरि पौड्याल बुटवलमा आगलागी भयो भन्दै घरबाट निस्केको र करिव पौने एक बजे घटना स्थल भएको घरमा प्रवेश गरेको सिसीटिभी फुटेजमा देख्न सकिन्छ भने भदौ २० गते बिहान करिव साढे ४ बजेको समयमा टिका घरबाट मास्क लगाई बाहिर निस्केको देख्न सकिन्छ ।
सिसीटिभी हेर्दा त्यहाँबाट हिडेका उनले नयाँमिल पुगेर आफ्नो भान्जा दाई रमेश भन्नेलाई फोन गरेर घटनाको जानकारी गराएको जस्तो देखिन्छ । र, बिहान सबै भन्दा पहिला भान्जा दाई रमेश नै पहिला उक्त घरमा आएका छन् भने त्यसपछि साढे ६ बजेतिर मृतक सीताका बाबु आमा र मामाहरु त्यस घरभित्र पसेको सिसीटिभिमा देख्न सकिन्छ ।
माइती पक्षका अनुसार त्यस बिहान एक्कासी काम छ भनेर टिकाको घरबाट बोलाइएको थियो । पछि माइतीजन त्यहाँ पुग्दा सीताको मुहार रक्ताम्मे अवस्थामा प्राण पखेरु उडिसकेको अवस्थामा देखिएको र उक्त दृश्य देख्न साथ सीताका बाबु–आमा बेहोस भई ढलेका थिए।
प्रत्यक्षदर्शी माइतीजनका अनुसार उनी आफ्नै घरको कोठामा मुखबाट रगत बगेको, गलामा चुङ्गीले कसिएको र भुँईमा लडेको अवस्थामा भदौ २० गते विहान मृत फेला परेकी थिइन् । मृतक सीताका बाबु हरिप्रसाद भण्डारीले छोरीको हत्या नै भएको भनि बुटवल ईलाका प्रहरी कार्यालयमा किटानी जाहेरी दिएको तर प्रहरीले किटानी जाहेरी लिन नमानेपछि त्यसको विरोधमा सयौं माइतीजनले प्रहरी कार्यालयमा धर्ना दिँदै आएका छन् ।
घटनाबारे मामा आकाश भन्छन् :-
भदौ १९ गते साँझ करिव साढे ६ बजेको समयमा सीताका श्रीमान ससुराली आएका थिए । उनी घरमा आएर तपाईकी छोरी अब बितरा पर्ने भई । मैले त आनन्दको जीन्दगी जिउँछु भनी धम्कीपूर्ण कुरा गरेर गएँ । अनि केही नबोली गाडीको अगाडीको ढोका जोडले लगाउँदै हुँईकिए ।
मेरी भान्जीको घर र मेरो पसल सँगै छ । त्यस दिन भान्जी ज्वाईँ टिकाले मदिरा पिएका थिए । केही हुने पो हो कि भन्ने सोचले लगत्तै मैले पटक पटक भान्जीलाई फोन हाने । साँझ ७ बजे देखि साँझ ९ बजे सम्म भान्जीलाई फोन हान्दा पनि फोन उठेन ।
अर्को दिन विहान ५ बजेर २५ मिनेट जाँदा सीताको श्रीमानको ८ सेकेन्ड मात्रै मिसकल आयो । हिजो जाँड रक्सी पिएर केहीँ बोलिकी भनेर एस्क्युज गर्न होला भनेर मैले कल ब्याग गरिन । त्यसलगत्तै भाईलाई फोन आएछ । उनले मेरो घर आउनुस् भन्नुको सट्टा मेरो घरमा जानु भनेछन् । के के भयो र भनेर सोध्दा केही भएको छैन एउटा काम छ भनेछन् । सासु ससुरालाई फोन गरेर पनि मेरो घर छिट्टै जानुस् भने छन् ।
पछि कारण सोध्दा केहीँ भनेर मात्र आइहाल्नु पर्ने भयो । अति जरुरी काम पर्यो भने । मेरी दिदी पुनम भण्डारी (मृतककी आमा), भाईहरु पदम पोखरेल र लक्ष्मण पोखरेल पहिला त्यस घरमा पुगे । म पछि मात्रै गएको हुँ । उनीहरुले त्यहाँ पुगेर हामीहरुलाई किन हतार हतार बोलाउनु भएको हो ? दिदीले मेरी छोरी कता छिन् भनि सोध्दा घरमा भएका सासु ससुराले कुनै जवाफै दिएनछन् ।
त्यति बेलासम्म ज्वाँई घरमा थिएनन् । त्यसको करिव २० मिनेट पछि घरमा ज्वाँई बाहिरबाट घरमा आएर तपाईंहरुको छोरीलाई मार्नमा प्रमुख हात यसैको छ भनी उनको दिदी (जो चितवनबाट माइत आएकी थिईन् विष्णु पौडेल) लाई औँला ठड्याउँदै कराउन थाले । त्यसपछि मृतका बाबु–आमा छोरी जीवित छैनन् भन्ने ठानेर बेहोस भई त्यही ढलेछन् ।
भाइ पदम पोखरेल र लक्ष्मण पोखरेलले घरभित्र गई हेर्दा अट्याच कोठाबाट बाथरुममा पस्ने ढोकामाथि काटिएको चुङ्गी झुण्डिइरहेको, सीतालाई भुँईमा घोप्टोपारी सिरानीमा टाउको राखिएको, मृतकको दुवै कोखामा निलडाम रहेको, मुखबाट रगत बगी अनुहारमा लत्पत्तिएको र घाँटीको दायाँ छेउमा गाठो पारिएको चुङ्गीले कसेको अवस्थाम फेला पारेका थिए ।
टिकामाथि अनुसन्धान जारी
सुरुमा मृतक सिताका बाबु हरिप्रसाद भण्डारीले छोरीको हत्या गरिएको भन्दै बुटवल ईलाका प्रहरी कार्यालयमा किटाननी जाहेरी दिएका थिए । प्रहरीले लिन नमाने पछि त्यस कार्यालयमा माईतीजनले धर्नाा दिएका थिए । प्रहरीले हत्या नभई आत्माहत्या दुरुसाहननको मुद्धा दर्ता गर्न लगायो, आरोपित उनका श्रीमान टिका पौड्याल र उनकी दिदी बिष्णु पौड्याललाई पक्राउ गरयो ।
अर्को दिन अदालतले म्याद थप गर्न नमानेको भन्दै उनीहरुलाई छाड्ने कुरा भयो । माईतीजनले अदालत घेराउलगायतका विरोध कार्यक्रमहरु गरे । त्यसपछि अदालतले म्याद थप गर्यो । अहिले उनीहरुलाई प्रहरी हिरासत मै राखेर अनुसन्धाान गरिरहेको डिएसपी मदन कुँवरले बताएका छन् ।